Idamu laseMansilla lishiya idolobha limbozwe yisomiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isomiso ezinyangeni ezedlule esidale ukuthi izinga lamachibi amaningi kulo lonke elaseSpain lehle. Ikakhulu idamu laseRiojan Mansilla, elisezingeni eliphansi kunangaphambili. Ngamandla angu-14,7% kuphela, leli chibi lafihla ngemuva kwamanzi alo idolobha elincane elalicwilisiwe kusukela ngo-1960.
Njengamanje, ngenxa yesomiso namazinga aphansi amanzi, abakwaMansillan bayakwazi ukuhamba kuleli dolobha eselivele selivele. Isomiso singadala umonakalo emadamini njengoba sibona.
1 Isomiso nokuqedwa kwamachibi
2 Ngaphambi kokwakha idamu
Isomiso nokuqedwa kwamachibi
Imvamisa, izakhamizi zaseMansilla de la Sierra zigeza njalo ehlobo echibini ukusiza ukulwa namazinga okushisa aphezulu. Noma kunjalo, isomiso asivumanga ukugeza kokuzithokozisa kulo nyaka, kepha inikeze izivakashi zayo uhambo lokufuna ukwazi emigwaqweni yedolobha elidala elisentabeni.
Idolobha "elitholwe" ngokuhoxiswa kwamanzi echibi Yayinabantu abangama-600 futhi yayiyinhloko yesifunda, uma kuqhathaniswa nabangu-71 ababhaliswe njengamanje.
Ukuntuleka kweqhwa ebusika obudlule kanye nokuntuleka kwemvula ezinyangeni ezedlule kwehlise izinga lamanzi laba sezingeni lomlando, ngakho-ke kule nyanga usuyakwazi ukubona idolobha lonke, futhi uhambe imigwaqo yalo nezikwele ngaphandle kobunzima.
Ngaphambi kokwakha idamu
Zonke izakhamizi zaseMansilla de la Sierra ezineminyaka engaphezu kwengama-60 zikwazile ukulazi lonke leli dolobha. Ebhekene nesinqumo sokwakha idamu lokunisela nokunikezwa kwamanzi, amaMansillan kudingeke ukuthi ashiye idolobha ukuze akwazi ukuwachitha wonke lawo manzi.
AmaMansillan amadala ahamba ezitaladini zedolobha lawo enenjabulo futhi atshele abazukulu bawo ukuthi imizi yabo ikuphi futhi azulazule ngokulangazelela.
Yize lokhu kungabonakala njengomcimbi omuhle, cabanga ubucayi bendaba nokuthi kusho ukuthini lokhu: isomiso ongakaze usibone ngaphambili. Ngamanye amagama, idamu elinamandla we-14% lawo, impela, akuyona yonke into engasebenziseka, ngenxa yesomiso eside nesishubile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Idamu laseMansilla lishiya idolobha limbozwe yisomiso